Faah-faahin cusub laba qarax oo lala eegtay Ciidamada Burundi ee deeganka Buurane & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin cusub laba qarax oo lala eegtay Ciidamada Burundi ee deeganka Buurane...
Faah-faahin cusub laba qarax oo lala eegtay Ciidamada Burundi ee deeganka Buurane & Wararkii ugu dambeeyay
Mahadaay (Halqaran.com) – Ciidanka Burundi ee qaybta ka ah Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM) ayaa waxaa maanta laba qarax lagula beegsaday duleedka Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Kolonyo ay la socdeen Ciidanka Burundi ayaa qarax wadada dhinaciisa lagu aasay lagula eegtay Deegaanka Buurane, oo dhaca duleedka Degmada Mahadaay, waxaana qarax ka dib la maqlay rasaas ay dhawr jiho ciidankaasi u furayn.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi uu burbur xoogan soo gaarsiiyay gaari Taw ahaa oo Ciidanka Burundi ay la socdeen. Dadka deegaanka waxay sheegeen in afar askari ku dhimatay qaraxaasi.
Ciidan gurmad ahaa oo ka soo dhaqaaqay xerada Amisom ku leedahay Deegaanka Buurane ayaa qarax labaad lagula eegtay meel ku dhow, halkii qaraxa hore lagula beegsaday kolonyada Ciidanka Burundi.
Gurmadkii Ciidanka Burundi u socday ayaa ku hakaday goobtii qaraxa lagula beegsaday, waxaana adag in faah faahin laga helo waxyeelada uu qaraxaasi ka soo gaaray Xoogaga AMISOM.
Dhanka kale, Ciidanka Burundi oo halkaasi ka sameeyay hawlgalo qaraxydaasi ku aadan ayaa gacanta ku soo dhigay koox dhalinyaro ah, kuwaa oo la soo sheegayo in ay u kaxeysteen xeradooda Buurane.
Ciidanka Burundi ayaa dhalinyaradaasi ku tuhmaya in ay ka masuul yihiin qaraxyadaasi amaba ay xiriir la leeyihiin maleeshiyada Ururka Al-Shabaab. Qaraxyadan oo aanay sheegan Al-Shabaab ayaa hadana iyaga lagu tuhmaya in ay ka masuul yihiin.
Ururka Al-Shabaab oo ka biyo diidan jiritaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo joogitaanka dalka ee Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa dagaalka ay dalka ka wadaan waxaa qayb ka ah qaraxyada ay gaysanayan.
Ciidamada Burundi ee deegaanka Buurane